Bottleless Mvura Distributor → Kosmetic mvura disensers muPoland
Inodiwa newe mudziyo wemvura kukambani, hofisi? Water Point semumiriri wega Zvinodhaka muPoland mune zvekupa dzisiri-cylinder mvura dzinogadzira mvura zvekushandisa zve nzvimbo yekudyira, hotera, hofisi, mahofisi, makiriniki nezvipatara, zvikoro, mapaki uye nzvimbo dzemitambo, kurova muviri uye domu.
Cosmetal nhasi ndiyo yakakurisa yeItaly mugadziri uye yepasi rose mutungamiri mukugadzirwa kwezvinhu zvinogadzirisa mhinduro yekumwa mvura.
Kugadzirwa kwemafiriji, ari mumabhodhoro uye mumvura, ari 100% Gadzirwa muItari.
Cosmetal inozvirumbidza imwe yezvakapararira zvinopihwa muindastiri, zvese maererano nemhando dzezvigadzirwa zvinunurwa mvura - tembiricha yekamuri, kutonhora, kupisa, kupenya - pamwe nemhando dzakasiyana dziripo.
Kuzvipira kwenyika dzepasi rose, pamwe nemhando yezvigadzirwa zvayo, yabvumidza iyi kambani yehunyanzvi kuti iwane huwandu hwehunhu uye kuve mutengesi wemamwe mapato akakosha ekutenga, muItaly nepasi rose, ayo masikirwo etsika anogadzirwa.
Hi-Kirasi ndiyo yepamusoro-kirasi mvura dispensery, Yakagadzirwa uye yakagadzirirwa zvese zvinoshandiswa uye zvemukati. Inoshandisa zvigadzirwa zvemazuva ano zvigadzirwa uye zvakanakisa zvigadzirwa izvo zvinovimbisa kushanda kwakanyanya uye kuvimbika, zvichikubvumidza iwe kusvika pa45 l / h yechitonhora uye inoparadzira mvura uye 13 l / h yemvura inopisa.
Inoshanda mhando ina dzemvura: kupisa kwekamuri, kutonhora, kupenya uye kupisa, izvo zvinogona kudururwa mumidziyo yematanho akasiyana-siyana nekuda kwekutumbuka kunogadziriswa. Chimiro chemazuva ano; kumberi kwakagadzirwa girazi girazi girazi rakasanganiswa nesimbi isina chinhu uye inoyevedza kutonga pani, gadzira chigadzirwa chine yakakwira kwazvo zvekushandisa tsika.
Pro-Stream cylinder-isina mvura yekupa. Inotonhora, inopisa uye fizzy mvura
PRO-STREAM chihwande ine dhizaini yazvino uye yakasarudzika neyemagetsi yakaomeserwa kenduru, control touch panera, ichizivisa zvakajeka nezve mamiriro ekushanda kwechishandiso, kusanganisira mabasa: kugadzirira, kupisa, kudzima. Inoshanda mune zvakasiyana neboiler, firiji uye gassing system.
Iyo sisitimu zvakare ine inoyerera system iyo inodzora mashandiro emushandisi weo mudziyo, zvinodzikisira mashandisiro esimba. Iyo inoisa mvura inopisa nekudziya kwe 98 ° C kubva panguva yekuchinja, kugona kuzadza kusvika pamakumi maviri nemakumi maviri nemashanu makapu paawa paine huwandu hwemakumi maviri nemashanu ml, pamwe nesarudzo yemvura inotonhora uye inopenya kusvika ku215 l / h. Inogona kushandiswa kugadzira tii, kofi uye zvimwe zvinwiwa zvinopisa nenzira yekukurumidza uye inoshanda.
Mvura yemvura inogadzira mvura
Kuziva kwevanhu - cylinder-isina mvura disenser inoshanda, yakasimba, iine chitarisiko chemazuva ano, chakagadzirwa nezvinhu zvakanakisa zvichiona kushanda kwakasimba uye kusimba. Iyo yakagadziriswa tekinoroji uye tekinoroji mhinduro inova nechokwadi chiri nyore uye chakachengeteka kushanda, zvichikanganisa zvakanyanya mashandiro ekushandisa nekuderedza mashandisiro esimba.
Iyo yakasununguka yemvura yeAquality inotonhorera inopa 22 l / h yevakave uye yakanatswa mvura, inokwana vanhu makumi mana.
Kuumbwa kunoshandisa ICE Bank tekinoroji mumvura iyi inotonhorera, yakabatana zvakananga kune mvura mvura.
Iko hakuna kwekuvakira-mukati dziva, iyo inopa yakakwirira yepamusoro yekudzivirira kwehutsanana sezvo mvura isina kuchengetwa pakupera kwevhiki uye nezororo.
Inodziya mvura inotonhorera inochengetedza nzvimbo yekuchengetedza. Chitarisiko chine maratidziro chinokodzera chero nharaunda.
Kuziva kunoita munhu kune yakakura yekuvhura iyo inobvumira kuti iwe uzadze majegi uye mabhodhoro.
Yakakwana sehurongwa hwemvura repamba kana sehofisi yemvura inotonhorera
Yakabatanidzwa mukombe wemukombe (7 makapu)
Pasina tangi yekuchengetedza / Kutonhora zvakananga
Kugara kuwanikwa kwemvura yakatsvairwa mvura
Fekitori inowanikwa dhayeti
Hutsanana, zviri nyore kupukuta nzvimbo dzakachena
Cold mvura inotonhorera
1 gore waranti
Shanduro dzinowanikwa: mumba tembiricha mvura, kuchitonhora, kupisa, kupenya.
J-Kirasi chisirinda-isina mvura disenser
J-Kirasi mvura inodzosera mvura zvakabatana neyemhando yepamusoro uye yepamusoro technology, inovaita chishandiso chakavimbika mumaoko evashandisi, nekuda kwekuita kwayo kwakawanda, inoshandiswa mumahofisi, mabara, maresitorendi madiki nedzimba.
Ivo anowanikwa mune maviri akasiyana: TOP pane counter uye IN under counter, kugovera mhando ina dzemvura: tembiricha yekushisa, mvura inotonhora, mvura inopisa pa 98 ° C uye carbonated mvura, iine masimba maviri 30 l / h uye 45 l / h.
Niagara Falls - makusha emvura kubva kumhuri iyi inogara yakasimba uye yakavimbika michina michina inotsiva mvura yemumabhodhoro, kufambisa basa, kubvisa zvinodiwa zvekuongororwa uye kuchengetwa, chengetedza nguva nekufambisa zvinhu, uye nekupa yakakwirira miero uye nekushanda.
Naizvozvo, zvakagadzirirwa madhizaini-makuru ekushandisa, zvichisimbisa kusagadzikana kushanda kana kugovera yakakura yemabhodhoni uye isina-kabhoni mvura, ichikubvumira kuzadza dzinenge mhando dzese dzechikepe nekukurumidza uye kuderedza mutengo. Kune matatu emhando: yepamusoro countertop, IN isina kusimbiswa uye yakasununguka-yakamira.
Yakakwana yekugovera huwandu hwakawanda hwemvura inotonhora, yese ichiri uye inopenya. Inokodzera zvakakwana mune yekudyara chikamu: mumabhawa, mumaresitorendi, mahotera uye canteens. Iyo dispenser inogona kuve yakabatana nechero pasi-counter system kuti isangane chero chinhu chinogovaniswa. Kubvumidzwa kwekushandiswa uye kusarudzwa kwezvinhu zvepamusoro zvemhando yepamusoro zvinovimbisa hutsanana hwakawanda uye panguva imwechete inoderedza kudikanwa kwekugadziriswa kusingawanzo.
Iyo silinda-isina H2O mvura inogovera mvura yangu
H2O isu tiri mudziyo wemvura ine compact zviyero, dhizaini yemazuva ano, yakapusa uye intuitive mashandiro, kuve yakanakisa sosi yemvura inonaka pakamuri tembiricha, kutonhora, kupenya uye kupisa.
Inouya mune maviri shanduro: TOP countertop uye IN pasi pe countertop ine spout.
Iyo G ZERO sinda-isina mvura disenser
Chrome-yakarongedzwa faucet neatema kana yakacheneswa isina tsvina simbi yekuvhara.
Iyo Acqua Alma Point humburumbira isina mvura yekupa - Chinhu chitsva chekudyidzana chedhijitari kuchengetedza nyika yedu
Acqua Alma Point ndeyekuchenesa nzira iyo inogona kuendesa chero mhando yemvura, kuiomesa kuti iugadzire zvinwiwa zvinwiwa, asi kazhinji pane vese vanoshandira kubatana nemushandisi kuburikidza neApp Acqua Alma Refill uye bhodhoro rakangwara rine NFC tag. Kutenda kune iyo yekushandisa, mushandisi anogona kubata profiles, zvido, maresiphi, nguva dzose ongorora hydration level uye uwane padyo Acqua Alma point. Kunyangwe nekutenda kuNFC, bhodhoro iri rakabatana neye mushandisi chimiro uye inozivikanwa nemuchina, vachirangarira mafaro kana kukwidziridzwa kunoitwa muprofile.
5 / 5 ( 64 mavhoti )
Acqua Alma Pointcylinderless mvura vanoisa mvurasilinda-isina mvura disenserbhodhoro remvura kune disensermudzimba mvura disensermvura inopihwa kuhofisikugoverwa kwemvura yemasikati kuimbavanopa mvura kumakambanikugovera mvura makambanikugoverwa kwemaminerari mvuramudziyo wemvuramvura inogovera vanadisenser yemvura inopenyamacro mvura disensermvura disenser Warsawinopisa mvura disensermudziyo wemvuramudziyo wemvura5l mvura inowanikabhodhoro risina mvura remvurasilinda mvura inogoveramutero wemvurazvakasikwa Chipo mvura disensermvura inogovera vanamvura inogovera hofisimudzimba mvura disensermuto wemvura dhizaundikudzimba mvura disenser wongororomvura inogovera ikambanikunwa mvura disensereden mvura inowanikidzakabhoni yakagadziriswa mvura disenserkabhoni yakadhirowa mvura inogovera imbaeden anotsemuka mvura disensermvura inogovera mashandiro ayomineral mvura disensermudziyo wemvura wemabhodhorokunwa mvura disensermvura inowanika mufirijimvura inowanika mufiriji kuti inoshanda seimvura disenser Warsawrendi yemvura yekuwachisamvura yekuburitsa mvura mutengoco2 dhayeti yemvuratap mvura disenserdisenser yemvura nefirijimvura inotonhora disenservanopa mvura emakambani nemahofisimvura inodzimamvura inogovera makambanimvura inogovera hofisikudzimba dzemvura dzimbaeden mvura inodzimamvura inopararirakunwa mvura makomendimatsime emvura mvuramvura inodzimaImwe mvura inodzosera mvurakumwa mvura yetsimefiriji mvura disenserNzvimbo yemvuramvura yemahofisimvura yehofisimvura yeiyo hofisi mutengo rondedzeromudzimba mvura disensermvura inodzimamineral mvura inogoveramvura mumidziyo yemakambanimvura kubva mugabamvura kubva kune inogovera kune makambanimvura kubva kune ino disenser kuenda kumbamvura kubva kune yeensens kuongororamvura ine dispenserchitubu mvura nekutakura kumba